Arrinta shakhsi ahaan u khuseysa Pompeo ee loo dilay Janaraal Suleymaani - BBC News Somali
Image caption Pompeo oo Arbacadii la sheekeysanayay xog hayaha gaashaandhigga Mareykanka, kadib markii ay sharraxaad ku saabsan xaaladda Iiraan siiyeen xildhibaannada
Hase ahaatee, raggan ma aysan ku guuleysanin inay dowladda Mareykanka ku qanciyaan safarkooda, iskaba daa inay Iiraan tagaane, laakiin Pompeo wuxuu diray farriin cad - oo ahayd inuu Iiraan ku yiri 'isha ayaan idinku heyn doonaa'.
Sarkaal reer Iiraan ah ayaa si kaftan ah u sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in Pompeo loo oggolaado visaha, wuxuuna yiri; "Waxaan Tehran ku heysan lahayn agaasimaha CIA-da".
Image caption Aas ay dadweyne badan ka qeyb galeen ayaa Suleymaani loogu sameeyay Iiraan
Sidaas darteed, markii ay iskeentay fursadda xididdada loogu siibi karo Suleymaani, Pompeo wuxuu ka mid ahaa dadkii madaxweyne Trump kula taliyay in laga faa'iideysto, iyadoo xitaa la ogaa in tallaabadaas ay horseedi karto dagaal iyo inay dunida ka abuurmaan unugyo argagixiso ah oo salka ku haya Iiraan.
Go'aankii lagu bartilmaameedsaday janaraalka reer Iiraan wuxuu ahaa mid labo waji u leh Pompeo.
Halistii midowga Soviet way jirtay markaas, laakiin Pompeo oo nin da' yar ahaa wuxuu khatarta ugu weyn u arkayay Iiraan iyo xoogagga ay taageerto.
"Tallaabadan waxay wax weyn u tahay Pompeo, sababtoo ah wuxuu madaxweynaha ka dhaadhiciyay sida uu dilka Suleymaani muhiim u yahay", sidaas waxaa yiri Michael Pregent, oo horay uga tirsanaa saraakiisha sirdoonka Mareykanka ee kasoo shaqeeyay Ciraaq, dhawanna aqalka Congress-ka hortiisa ku markhaati furay heerka ay gaarsiisneyd saameynta uu Suleymaani ku lahaa Ciraaq.
"In Iiraan laga dilo Qaasim Suleymaani ayaa uga daran in laga burburiyo nuclear-ka ama ciidamada badda oo dhan", ayuu yiri Pregent, oo intaas kusii daray; "Ninkan wuxuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee laga dili karay Ayatollah".
In meesha laga saaro Suleymaani waxay xukuumadda Baqdaad u sahashay inay fursad u heshi sidii ay u baabi'in lahayd saameynta iyo galaangalka ay Iiraan ku leedahay dalkaas.